Maninona ny minisitry ny fizahan-tany any Bulgaria no mampiantrano ny famatsiam-bola amin'ny Fihaonambe fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maninona ny minisitry ny fizahan-tany any Bulgaria no mampiantrano ny famatsiam-bola amin'ny Fihaonambe fizahan-tany
Ny minisitry ny fizahan-tany any Bulgaria, ny Hon. Ramatoa Nikolina Angelkova dia miomana hampiantrano Fampiasam-bola amin'ny fizahan-tany tamin'ny 30-31 Mey tany amin'ny fireneny.
Ny minisitra dia manoritsoritra ny fahitany hanintona ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny tetikasany hametraka ny hafainganana amin'ny fitohizan'ny fizahantany any amin'ny Repoblikan'i Bulgaria sy ny faritra Eoropa atsimo. Niara-nipetraka tamin'ny eTN Afficilate ny minisitra Angelkova:
Q. Inona ny antony nanosika ny minisiteran'ny fizahantany any Bulgaria hikarakara ny 'Fihaonamben'ny fampandrosoana maharitra amin'ny fizahan-tany'
Manaraka ny politikanay amin'ny famadihana an'i Bulgaria ho toerana fizahan-tany mandritra ny herintaona, mino izahay fa tena zava-dehibe ny fizotry ny fisarihana ny famatsiam-bola amin'ny sehatra. Ity karazana forum ity dia matetika manome vahaolana, fomba fanao tsara, tetik'asa ary sehatra iray hananganana fifandraisana eo amin'ireo mpampiasa vola mety hitranga. Miezaka izahay mba hanao hetsika ambaratonga voalohany mba hahazoany akony, tsy eto amin'ny firenena ihany fa amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay hahitan'ny tetikasa sy hevitra kasaina hatao ny ho avy.
Q2. Ny fihaonambe dia mikendry ny hisintona famatsiam-bola amin'ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny firenenao fa ao amin'ny ny faritra Eoropa atsimo atsinanana. Ahoana ny fomba hahazoan'i Bulgaria tombony amin'ny fampiakarana fampiasam-bola mivantana avy any ivelany any amin'ny firenena mifanila aminy?
Bulgaria dia tsy toekarena mihidy fa azo jerena ho isan'ny faritra manana tombony tena lehibe eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Mbola misy ny mety ho fivoaran'ny sehatra any Eropa atsimo atsinanana. Tombony ho an'ny olom-pirenena rehetra ny fanatsarana ny toe-draharaha sy ny fampitomboana ny fizotran'ny fizahan-tany any amin'ireo firenena ao anatin'ny faritra satria ny fizahan-tany dia làlana mankany amin'ny finamanana misy eo amin'ny firenena ary miaraka amin'izay koa dia iray amin'ireo sehatra toekarena lehibe indrindra. Fotoana mety tsara ho an'i Bulgaria sy ireo mpizahatany Bolgara mba hankafizany ireo fotodrafitrasa sy serivisy fizahantany nohatsaraina.
Q3. Amin'ny fomba ahoana no kasainao hanatsara ny fifamenoana eo amin'i Bulgaria sy ny hafa Firenena eropeana atsimo atsinanana ka hiteraka synergie miampy sanda ambony?
Misy zana-sehatra ao amin'ny orinasa, izay, noho ny tanjona kendrena, ny firenena eropeana atsimo atsinanana sasany dia misongadina miaraka amin'ny tombony bebe kokoa noho ny hafa. Ohatra, ny firenentsika dia afaka manolotra traikefa voaporofo eo amin'ny sehatry ny fizahan-dranomasina sy an-tendrombohitra. Ho anay dia loharanom-bola lehibe izy ireo, fa raha te hahatratra ny tanjona amin'ny fampivoarana ny fizahan-tany mandritra ny taona dia afaka mandray ny fomba fanao tsara izay ananan'ny firenena hafa amin'ny fizahantany spa, fizahan-tany ara-kolontsaina sy ara-tantara, fizahan-tany momba ny gastronomika, sns. Ny fivoaran'ny vokatra fizahan-tany iraisana eo amin'ny firenena dia ohatra tsara amin'ny fomba ahitantsika ny synergie tadiavina amin'ny fizahantany any amin'ny faritra.
Q4. Amin'izao fotoana izao, inona ny hetsika lehibe efa noraisina mba hiantohana ny fitomboana maharitra amin'ny ny indostrian'ny fizahantany any Bulgaria?
Ny Minisiteran'ny fizahantany dia namolavola sarintany momba ny Tetikasa fampiasam-bola ho an'ny fizahan-tany any Bulgaria, izay manangona tolo-kevitra avy amin'ny tanàna rehetra ao amin'ny firenena. Tianay ny hameno ity hetsika ity ary handamina ny fanontana faharoa ato ho ato. Ny fanaovana forum misy lohahevitra miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fizahan-tany ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana dia fotoana mety hanatsarana ny fahaizana sy ny fifanakalozana fomba fanao tsara. Dinika mitovy amin'izany no nokarakarain'ny Minisiteran'ny Fizahan-tany tamin'ny taona 2017. Teo anelanelan'ny 2016 sy 2018, ny minisitera dia nandray anjara tamin'ny endrika toekarena tamin'ny sehatra isam-paritra, toy ny Black Sea Economic Economic (BSEC), izay nitana ny toeran'ny mpandrindra. Mandray anjara mavitrika amin'ny fivorian'ny Komity Fizahan-tany OECD izahay ary mandamina vondrona miasa iraisana eo amin'ny firenena ao anatin'ny faritra izay ifanakalozanay hevitra momba ny fandraisana andraikitra sy tetik'asa ary fotoana mety iraisana.
Q5. Inona no vokatra antenainao amin'ity andiany voalohany amin'ny 'Investing in Sustainability maharitra ity Conference '?
Manantona an'ity hetsika ity amin'ny fanantenana tsara izahay satria ho avy ny vahiny ambony sy ny mpandahateny. Tsy vitan'ny manantena handre hevitra sy tolo-kevitra mahaliana marobe isika mandritra ny tontolon'ny dinika, fa manantena koa isika fa handray anjara mavitrika amin'ny adihevitra ny mpandray anjara. Ny forum dia manana ny fahafahany ho lasa hetsika tambajotra avo lenta miaraka amin'ny fanantenana ho amin'ny fampandrosoana amin'ny ho avy. Fotoana iray hafa io hampiroboroboana ny toerana haleha ary maneho ny tombony azo avy amin'ny sehatry ny fizahan-tany Bulgaria.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny kaonferansa www.investingintourism.com
Misimisy kokoa ny fandrakofana eTN momba an'i Bulgaria: https://www.eturbonews.com/world-news/bulgaria-news/
Fanairana fiarovana: Nampitandrina ny Amerikanina ny masoivoho amerikana any Baghdad mba tsy handeha any Irak